24 jir 70 centimeters oo loo caleemo saarey ninka dunida ugu gaaban(Warbixin+Sawiro) – SBC
24 jir 70 centimeters oo loo caleemo saarey ninka dunida ugu gaaban(Warbixin+Sawiro)
Edward Nino Hernandez wuxuu nooc kasta kala mid yahay nin 24 sano jir ah oo u dhashay wadanka Colombia, wuxuu jecel yahay in uu music ciyaaro, wuxuu ku haminayaa in uu yeesho baabuur waliba Mercedes isagoo waliba rajeynaya in uu aduunka soo arko.
Dadka uu jecel yahay in uu la kulmo oo uu arko waxaa ka mid ah jilayaasha caanka ah Jackie Chan, Sylvester Stallone & waliba madaxweynaha wadanka Colombia Alvaro Uribe.
Nino waxaa dhawaan loo caleemo saarey ninka aduunka ugu gaaban isagoo galey ama lagu soo bandhigey buuga lagu soo bandhigo waxyaabaha mucjisada ah ee aduunka ka dhaca (Guinness World Records ee 2011).
Ninkan miisaankiisu waa 22 Kg, wuxuu dhirir ahaan le’egyahay boorsada yar ee gacanta lagu qaato ee (cabin carry-on luggage), dhirirkiisuna waa 70 centimeters.
Ninkan hooyadiis oo lagu magacaabo Noemi Hernandez waxay sheegtey in wiilkeeda Nino aanu korin tan iyo laba sano markuu jirey, isagoo ilaa haatan oo 24 sano uu jiro aanu u muuqan nin da’daasi jira.
Nino wuxuu darajadan ugu gaabahana aduunka kala wareegay He Pingping oo u dhashay wadanka Shiinaha kaasi oo dhirirkiisu uu ahaa 4 centimetres oo kaliya, kaasi oo geeriyoodey 13-kii bishii March ee sanadkan.
Khagendra Thapa Magar oo u dhashay wadanka Nepal oo bishii October ee sanadkii hore 18 sano jir noqdey, isla markaana dhirirkiisu uu dhan yahay 56 centimetres, waxaana buuga caalamiga ah ee Guinness uu u aqoonsadey wiilka nool ee ugu gaaban aduunka.
Nino oo u dhashay degmada ku taal koonfurta magaalada Bogota ee caasimada wadanka Colombia waxaa waalidkiis ay sheegeen inaanu heli wax daaweyn, iyadoo hooyadiis ay sheegtey in dhakhaatiirtu aanay u sharaxin sababta Nino uu u noqdey nin aad u gaaban.
Hooyadiis waxay sheegtey in wax daawo aan la siin, waxay sheegtey Hernandez oo 43 sano jir ah in Nino markii uu dhashay miisaankiisu ahaa 1.5 Kg, wuxuuna dhirirkiisu ahaa 38 centimeters.
Inkastoo Nino uu yahay ninkaasi aadka u gaaban, hadana hiwaayada & hamiga aduun ma ahan mid ay ka maqan tahay, wuxuu sheegay in uu leeyahay gabar saaxiibo ay yihiin oo lagu magacaabai Fanny taasi oo 18 sano jir ah, iyadoo dhirikeedu uu yahayt 1.5 meters.